बिरगंजमा द्वैद्ध नागरिकहरुको बिगबिगि – Ankush Daily
बिरगंजमा द्वैद्ध नागरिकहरुको बिगबिगि
On २५ कार्तिक २०७७, मंगलवार २०:१९
यसपटक विहारमा भएको निर्वाचनले बिरगंजमा बसिरहेका सयकड़ौ द्वैद्ध नागरिकहरुको पोल खोलि दिएको छ ।
झुठो विवरण पेश गरी नेपाली नागरिकता हासिल गर्ने, त्यसको आडमा अबैध काम गरेर करोडौं अर्बौंको कर मार्नें, बैंकमा कमसल मुल्यको जग्गा राखी कुश्त रकम निकालेर मौज गर्ने गिरोहलाई सामाजिक र राजनैतिक दुबै खाले संरक्षण प्राप्त भएकोले देश झन-झन गरिब र ब्यक्ति अमीर बन्ने परिपाटीको विकास भएको छ ।
नेपाल भारतको दोहोरो नागरिकता लिएर दुबै देशको सुबिधा उपभोग गर्ने ब्यक्तिहरुको छानबिनमा जुटिरहंदा बिरगंज ए.एम.सि. अस्पतालको अगाडि दश तले भवनमा बस्ने सुशील कन्दोइ भारत नेपाल दुबै देशको नागरिक भएको पत्ता लगेको छ ।
सुशीलको बिरगंज महानगरपालिका वडा नं ५को मतदाता नामावलीमा नाम छ भन्ने रक्सौल नगरपालिकाको भोटर लिस्टमा समेत नाउँ रहेको पोल खुलेको छ । मंगलचन्द कन्दोइको छोरा र रामचन्द कन्दोइको पोता सुशील कन्दोइ अहिले काठमाडौंमा पहाडीमुलको युवती संग बिहे गरि बसेको बताइन्छ ।
यसैगरी केही खानदानि नेपालीहरु पनि भारतीय सुबिधा हासिल गर्ने र त्यँहा जग्गा जमीन जोडन बैंकमा पेशा लुकाउन भारतीय मतदाता नामावलीमा नाम लेखाएको पत्ता लागेको छ । कुनै वेला नेपाल मै चर्चित अधिवक्ता स्वर्गीय रतन लाल कनाेडियाको छोरा एवं बिरगंजका प्रख्यात जाटिया खान्दानको प्रेम जाटियाको भिनाजु पवन कनाेडिया पनि द्वैद्ध नागरिक भएको पोल खुलेको छ । कनाेडिया संग यस बारे बुझ्दा उन्ले फोन उठाएनन् भने प्रेम जाटियाले आफ्नो भिनाजु पवन कनाेडियाको सब कागजात ठिक भएको र उनी द्वैद्ध नागरिक नभएको दाबी गरेका छन ।
द्वैद्ध नागरिकलाई कुनै पनि हालतमा नछाेडिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसक्नु भएका प्र.जि.अ. आश्मान तामाङले द्वैद्ध नागरिकहरु माथी उजुरी दिन सर्वसाधारणलाई आव्हान गर्नु भएको छ ।